Pamhepo dombo rekuyedza sevhisi - 48 maawa mhinduro - 10 madhora US padombo
Isu tinopa iyo webhusaiti yekuongorora mabwe
Pamusoro pebwe rekuyedza mutengo webasa: gumi chete madhora US padombo / Mhedzisiro mumaawa makumi mana.
* Kubhadhara mune chero mari.
Kubva pamifananidzo yemabwe uye mavhidhiyo anopiwa. Tichaongorora akasiyana matombo edombo rako:
Online ibwe rekuyedza sevhisi. Muenzaniso wemhedzisiro neemail:
Reflection of mwenje. (moto)
Crystal dhizaini (yematombo akaomeswa, asina kuchena)
Mushure mekuongorora zvese izvi zvivakwa, iwe unowana yako mhedzisiro zvakanyatsojeka sezvinobvira.
Semuenzaniso, kana mhedzisiro iri "girazi", Asi isu hatigone kuziva kana chiri girazi rechisikigo or yakagadzirwa girazi. Tinokupa mhinduro dziri mbiri, uine chikamu cheyakaitika.
Girazi. Zvimwe: 100%
Girazi rakagadzirwa nevanhu: 90% mukana
Girazi rechisikigo (Obsidian): 10% mukana
Iwe uchawana mhinduro yako neemail mukati maawa makumi mana nemasere mushure mekubhadhara.
Hapana ruzivo rwakawedzerwa kana rwunoteverwa ruchapihwa.
Zvirinani kunaka kwemifananidzo nemavhidhiyo ako, zvichave zvinonyatsozivikanwa kuzivikanwa kwedu.
Kutumira mafoto nemavhidhiyo?
Mushure mekugamuchira mubhadharo wako, iwe uchagamuchira email yekusimbisa ine sarudzo dzakasiyana kutumira yako mafaira: Email, Messenger, WeChat, WhatsApp, Line, Viber, nezvimwe.
Munoziva sei mapikicha edu?
Paunenge uchitumira mafaera, iwe zvakare uchafanirwa kutumira yako invoice nhamba, kuitira kuti tigone kunyatsoona mafaera ako.
Ndine matombo akati wandei kuti ndiedze, ndinofanira kuitei?
Iwe unogona kusarudza huwandu hwematombo kuti uedze, unogona kubhadhara zvese panguva imwechete neyomwe chete bhiri.
Ndakakutumira mafoto nemavhidhiyo asi ini zvakadaro handisati ndawana mhinduro?
Pamwe wakanganwa kutaura invoice nhamba kana pamwe hausati wabhadhara.
Ndingazive nyika yakabva dombo racho?
Kwete, hazvigoneke kuziva mabviro eapamabwe yedombo nepikicha kana vhidhiyo.
Kazhinji, hazvibviri kuyedza ibwe pasina kugona kuita bvunzo nezvokushandisa.
Chokwadi, hazvibviri kuyedza huwandu, Refractive index, kuumbwa kwemakemikari. Izvo zvakare hazvigone kuongorora inclusions pasi peiyo microscope, nezvimwe.
Ruzivo irworwo rwakakosha pakuongororwa kwakaringana. Mhinduro yedu saka ichave yakawanda kazhinji, nekuti iyo bvunzo yekuonekwa inongotiudza rumwe ruzivo iyo mune mazhinji mamiriro asina kukwana.
Mhedzisiro yacho haizo gwaro redziviriro. Ichave chete mafungiro eanopedza kudzidza gemologist.
Pasina mamiriro ezvinhu izvi zvinogona kufungidzira izvi kushandiswa segwaro
Hatizovi nemhosva yekutengesa kana kutenga dombo racho.
Sevaenzi. Isu hatipe mutengo wekutarisa basa. Mutengo unoenderana nemusika, uyo hauna chekuita neiyo gemological science.
Hapana kudzoserwa kuchazopihwa mushure mekugamuchira mhinduro. Chokwadi, kunyangwe kana ukaodzwa mwoyo nemhinduro. Iyo gemologist yakapedza nguva imwechete ichishandira pabwe chero chingave chinhu chisina kunaka kana dombo chairo.
Raira online ibwe rekuyedza sevhisi: 10 madhora US padombo
Kana iwe uchida kutaura kune gemology mudzidzisi. Isu tinopawo sevhisi yekubvunza pamhepo neVideoconference, nekugadzwa, kutanga pamakumi matatu US $ imwe paawa. Kubva Muvhuro kusvika Chishanu. 30am kusvika 8pm. Cambodia / Thailand time zone (UTC + 6)
Bhuka bhuku gemology yekubvunzurudza pamhepo: 30 $ USUS paawa